Fitaovana fikojakojana ny farihy sy fikojakojana ny fikojakojana ny ala - Ellicott Dredges
Fitrandrahana sy fikojakojana ny farihy
Ellicott Dredges mamolavola, manamboatra ary manome sotroka cutterhead ary ny tohatra mitaingina tohatra mety amin'ny tetikasa dredging farihy isan-karazany.
Ny fandavahana farihy dia mitaky fotoana sy drafitra mety. Alohan'ny hanombohana tetikasa iray dia zava-dehibe ny fandinihana ny safidy dredging rehetra misy, ny vidiny ary ny tanjona tratrarina amin'ny alàlan'ny fanodinana. Azonao atao ny manome antoka fa misy famatsiam-bola azo atao mba handaminana tsara sy hanatanterahana ilay tetik'asa ary koa handoavana izay mety ho vidiny fanampiny.
Ny ankamaroan'ny farihy dia omena rano avy amin'ny riaka na renirano izay mety misy fitaovana voaloton'ny loto sy karazana mineraly marobe. Ireo fitaovana ireo dia mety hanimba ny fahasalaman'ny farihy amin'ny ankapobeny ary mety hisy fiantraikany amin'ny hetsika fialamboly toy ny jono, lomano ary lakana. Rehefa mandeha ny fotoana, ny fitaovana toy ny silt mifantoka amin'ny otrikaina dia mety hanafotra farihy iray, ahafahan'ny zavamaniry sy voninkazo maniry maniry.
Ny dredging dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fitomboan'ny zavamaniry na ny voninkazo ahidrindra - amin'ny tranga sasany, ny fanovozana rano dia mety hitondra anjara biriky amin'ny fanodinana ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny rano amin'ny ankapobeny. Ny dredging dia afaka manampy ny halalin'ny farihy iray, mamorona toerana ho an'ny trondro ary manafoana ireo fepetra tsy misy oksizenina tery. Ny fananana faritra lalina kokoa amin'ny rano dia tena mahasoa an'ireo trondro monina amin'ny farihy izay mihamangatsiaka mandritra ny ririnina. Ireo fitaovana, toy ny fasika, izay nalaina tany anaty farihy dia azo ampiasaina indray hamenoana ny torapasika na ho an'ny tetik'asa fanarenana eo akaiky eo.
Fandaharana ho an'ny fandotoana farihy
Moa ve ianao ao amin'ny fikambanan'ny tompon-trano (HOA) na kaominina iray izay mieritreritra ny hampiasa vola amin'ny programa fikojakojana dredging farihy? Ny programa amin'ny fitrandrahana ny farihy dia mitahiry ny fahasalamana, fiarovana, kalitaon'ny rano ary fivezivezena amin'ny farihy iray. Ny mpanapa-kevitra sasany dia mihevitra ny vidin'ny fandaharana mialoha ho lafo be loatra fa tsy ny fanaovana dredging ho vahaolana maharitra.
Maro ny HOA miankina amin'ny famatsiam-bolan'ny governemanta eo an-toerana no nanangana orinasany tsy mitady tombombarotra sy distrikan-ketra manokana handoavam-bola ho azy ireo tetikady fampitrandrahana farihy ho avy. Ny tanàna izay manohana ny fandaharam-pitrandrahana farihy dia afaka mahazo tombony amin'ny hetra amin'ny ho avy ihany koa vokatry ny fanatsarana ny farihy izay mahazaka hetsika fialamboly toy ny jono, lomano ary sambo. Ny farihy iray voatazona tsara dia hisarika ireo mpitsidika izay vonona handany fotoana bebe kokoa amin'ny sy akaikin'ny farihy izay manome tosika ny toekarena eo an-toerana.
Vidiny fanodinana fanampiny
Mety ho lafo ny tetik'ady fanondrahana farihy. Zava-dehibe tokoa ny fiomanana amin'ny vidiny mifandraika amin'izany:
Fianarana azo atao
Famolavolana sy fahazoan-dàlana momba ny injeniera
Ny vidin'ny programa amin'ny dredging an-trano vs. ny vidin'ny asa ataon'ny mpandraharaha
Fitaterana sy fanamboarana fitaovana
Fitaterana sy fanariana fitaovana dredged
Fitantanana ny rano
* Ity lisitry ny fandaniana efa antenaina dia tsy misy lisitra feno ny vola rehetra mifandraika amin'ny tetik'orinasa.
Fahazoan-dàlana mitrandraka anaty farihy
Ny torolàlana ahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fanondranana farihy dia miovaova arakaraka ny toerana misy ny tetikasa. Raha mila fanazavana fanampiny dia manoro hevitra anao ny hifandraisanao amin'ny tanànanao, county na governemantam-panjakana anao raha mila fanazavana fanampiny.